फलोवर बढाउने सोच्दै हुनुहुन्छ ? ट्वीटरले गर्यो यस्तो निर्णय | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more फलोवर बढाउने सोच्दै हुनुहुन्छ ? ट्वीटरले गर्यो यस्तो निर्णय
फलोवर बढाउने सोच्दै हुनुहुन्छ ? ट्वीटरले गर्यो यस्तो निर्णय
चैत २७ गते, २०७५ - २१:४९
माइक्रो ब्लगिङ्ग साइट ट्वीटरले स्प्याम् रोक्नका लागि एउटा यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ जसका कारण तपाईको बढी फलोवर बढाउने सपनामा तुषारापात छाउने भएको छ । ट्वीटरले अब ४ सय भन्दा बढी नयाँ हेन्डलहरुलाई फलो गर्न नसक्ने बनाउने भएको हो । यसअघि सबै प्रयोगकर्ताहरुले १ हजार जनासम्म फलो गर्न सकिने थियो । ट्वीटरले यसबाट प्रयोगकर्ताहरुलाई कुनै पनि प्रकारको हानी नोक्सानी नहुने बताएको छ । यसले ट्वीटरको नीतिमा स्प्याम् पठाउनेहरुलाई प्रतिवन्ध लगाउन गरिएको जनाएको छ ।
स्मरणीय छ, ट्वीटरको यो नियम १० सेप्टेम्वर २०१८ बाट लागु भएको हो, जुन ट्वीट, रिट्वीट, लाइक, फलो र डाइरेक्ट म्यासेज गर्न एक सीमा तय भएको थियो । पुरानो नियमका अनुसार ३ घण्टामा सिर्फ ३०० ट्वीट र रिट्वीट गर्न सकिन्थ्यो । यसका अतिरिक्त २४ घण्टामा तपाई एक हजार ट्वीटलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्थ्यो र एक हजार मानिसहरुलाई फलो गर्न सक्नुहुन्थ्यो । साथै २४ घण्टामा तपाई १५ हजार मानिसहरुलाई डारेक्ट म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्थ्यो ।
ट्वीटरको यो नयाँ नियमले ति सेलिब्रेटीहरु जो २४ घण्टा भित्र लाखौं फलोवर्स एकाउण्ट बनाउने र आफ्नो ट्वीटलाई हजारौं पटक रिट्वीट गर्ने गर्दथे उनीहरुलाई भने यसले नोक्सान गर्ने भएको छ । तर यो नीतिले फेक समाचारलाई भने रोक्न सक्ने देखिन्छ ।
चैत २७ गते, २०७५ - २१:४९ मा प्रकाशित
इन्टरनेटको त कुरा छोडौँ, हेलो भन्न पनि राति समीको बोटमुनि पुग्नुपर्ने बाध्यता छ !